“Waxay U Ciyaarayaan Sidii Laba Qof Oo Bilaa Ujeeddo Ah” –
Halyeygii weerarka xulka qaranka Netherlands iyo AC Milan ee Marc van Basten ayaa ku eedeeyey Lionel Messi iyo Antoine Griezmann inay u ciyaarayaan sidii laba qof oo aan lahayn hadaf iyo ujeeddo ay doonayaan inay gaadhaan.
Barcelona ayaa Sabtidii lasoo kulantay guul-darro markii ay booqatay Atletico Madrid, waxaanay guul-darradeedaasi keentay inay ku jiraan kaalinta 13aad ee horyaalka waddanka Spain ee LaLiga iyagoo 12 dhibcood ka hooseeya kooxda hoggaanka haysa ee Real Sociedad.
Marc van Basten ayaa tilmaamay in labada ciyaartoy ee ay Barcelona guusha ka sugayso ee Messi iyo Griezmann ay u ciyaarayaan sidii kuwo aan doonayn inay wax guul ah gaadhaan oo kaliya garoonka ugu jira ‘waa la ciyaaraa’.
“Messi iyo Antoine Griezmann waxay u ciyaarayaan sidii laba qof oo bilaa ujeeddo (hadaf) ah.” Ayuu yidhi Marc van Basten oo u warramayay Ziggo Sport.
Weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann iyo xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi oo uu si gaar ah u sifeeyey ayuu u adeegsaday kelmadda ‘Stelletje koekenbakkers’ oo luuqadda Dutch-ka ah, taas oo loo adeegsado dadka iska socda ee aan shaqadoodu ku salaysnayn wax la hiigsanayo iyo meel la gaadho midna.
Lionel Messi ayaa ciyaartiisa saluug weyn laga muujinayay xili ciyaareedkan, laakiin Marc van Basten ayaa u cudur-daaray, waxaanu yidhi: “Shaki kuma jiro inuu ka cadhaysan yahay taageereyaal la’aanta.”
Guul-darrada Sabtidii ay kala kulmeen Atletico Madrid ayaa ku timid qalad xun oo uu sameeyey goolhaye Marc-Andre ter Stegen oo goolkiisa kasoo baxay masaafo 50 yard ah oo uu kubadda kusoo doontay, taas oo uu Yannick Carrasco kasoo hor-gaadhay, kaddibna kusii riixay labada lugood ee goolhayaha dhexdooda ka hor intii aanu kubadda ku tooganin goolka oo madhan.
after a shutdown, Ceni resumes the proclamation of the results